Covid 19 ကာလမှာ ဘာကြောင့် ERP system ကိုသုံးသင့်သလဲ နှင့် Work From Home? - Global Connect Asia
Covid 19 ကာလမှာ ဘာကြောင့် ERP system ကိုသုံးသင့်သလဲ နှင့် Work From Home?
Home/Covid 19 ကာလမှာ ဘာကြောင့် ERP system ကိုသုံးသင့်သလဲ နှင့် Work From Home?
👉 ERP system ကို organization တွေ Business တွေမှာ လုပ်ငန်းစီးဆင်းမှု (workflow) များကို ဗဟိုမှပေါင်းစည်းပြီး စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာတွေမှာ အရမ်းအသုံး၀င်ပါတယ်။
👉 Cloud based ဖြစ်တာကြောင့် မိမိရောက်ရှိတဲ့နေရာကနေ အချိန်မရွေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများပြီးမြောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။
👉 Manufacturing နှင့် Distribution များအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများအဆင့်ဆင့်ကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာခြေရာခံနိုင်ရန် GCA ERP system ကို အသုံးပြုနိုင်သလို
👉 Healthcare, nonprofit groups, construction and hospitality အပါအ၀င်အခြားသော စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
👉 စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတိုင်းရဲ့ staff, customers and inventory နှင့်ပတ်သတ်ပြီး GCA ERP ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများစီမံဆောင်ရွက်ရာမှာများစွာအထောက်အပံ့ပေးပါသည်။
👉 လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ Datas များအားလုံးကိုတစ်နေရာထဲတွငစုစည်းပေးပြီး Reports များကို လိုအပ်သလို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အလွယ်တကထုတ်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
👉 GCA ERP Myanmar သည် customer management, human resources, business intelligence, financial management, inventory and supply chain စသည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စံနစ်တစ်ခုထဲအတူတကွပေါင်းစပ်ပြီး မိမိလုပ်ငန်းများကို အချိန်ကုန်ငွေကုန်သက်သာစွာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း👍အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်စေပါတယ်။😇👍
♦️မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူသုံးအများဆုံး #Trading #Logistics #Manufacturing #Distribution company ကြီးများအတွက် GCA ERP မှအကောင်းမွန်ဆုံး system ရေးဆွဲပြီး လက်ရှိအသုံးပြုလျှက်ရှိပါတယ်။♦️
ERP နှင့်ပတ်သတ်ပြီးသိချင်တာများရှိလျှင် ဆက်သွယ်နိုင်သလို GCA website blogs များသို့လည်း၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ 🧐
Tel : 09964 4040 11, 0973142903
#trading_solution_myanmar #Logistics #Manufacturing #Distribution #Accounting
By gcaadmin|2020-04-30T17:17:43+06:30April 30th, 2020|0 Comments